जताततै बिस्फोट गराउने नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' छन् कहाँ? :: PahiloPost
Oct 21, 2018 | ४ कात्तिक २०७५
Oct 21, 2018 | ४ कात्तिक २०७५ Search
जताततै बिस्फोट गराउने नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' छन् कहाँ?
6th December 2017 | २० मंसिर २०७४
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा कडा बनाएको दावी गरे पनि बिस्फोटनका घटना '२० को १९' भएको छैन। देशका विभिन्न स्थानमा उम्मेद्वार तथा कार्यकर्ता लक्षित गरेर बिस्फोटनका श्रङ्खला कायमै छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएअनुसार निर्वाचन शुरु भएदेखि अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी स्थानमा बिस्फोटन भएका छन्। बिस्फोटनमा परी सुरक्षामा खटिएका एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ। घाइते हुनेको संख्या धेरै छ।
दिनै जसो बिस्फोटका घटना भए पनि गृह मन्त्रालय भने घटना कसले र किन गराएको भन्ने विषयमा मौन छ। यद्यपि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको भन्दै सबैलाई निर्धक्क भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन अपील गरिरहेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले भने देशभर भएका अधिकांश बिस्फोट नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको समूहले गराएको दावी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपाने भन्छन्, ‘केही ठूला बिस्फोट विप्लव समूहको सहभागिता देखियो। त्यसैले सोही समूहले घटना गराएको पुष्टि भएकाले अन्य नेताहरुलाई खोजी गरिरहेका छौं।'
प्रहरीले देशभर भएका विभिन्न बिस्फोटन घटनामा संलग्नता देखिएको अभियोगमा बुधवार बिहानसम्म ६ सय जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये २३ जनालाई छोडिसकेको जनाएको छ। बाँकीलाई भने म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको डिआइजी न्यौपानेले बताए। त्यस्तै चुनाव विरोधी गतिविधि गर्ने सिके राउत समुहका १३ कार्यकर्ता समेत प्रहरीको हिरासतमा छन्।
सबैभन्दा बढी कास्कीबाट ४२ जना, दाङमा ४१, चितवनमा २४, झापमा २० जना गरी देशभरबाट ६ सय कार्यक्रता पक्राउ परेका हुन्।
विप्लव कार्याकर्ता धेरै सङख्यामा पक्राउ परे पनि केन्द्रीय तह र पार्टीका शीर्ष नेताहरु भने प्रहरीको नजरभन्दा पर नै छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्पल देखि खड्गबहादुर विक लगायतका नेता अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। डिआइजी न्यौपाने भने घटना विप्लवले नै गराएकाले पार्टीका मुख्य नेताहरुको पनि खोजी गरिरहेको बताउँछन्।
कहाँ छन् विप्लव?
देशभर बिस्फोटका घटना भइरहँदा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भने भारतमा रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। विप्लव केही समय अगाडि कपिलवस्तु हुँदै भारत पुगेको स्रोतको दावी छ। एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘विप्लव केही समय अगाडि स्थलमार्ग हुँदै भारत गएको जानकारी आएको हो।‘
प्रहरी स्रोतले उनी भारतमा भएको दावी गरे पनि उनी खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृह जिल्ला कालिकोटमा बसेको जानकारी समेत आएको छ। केही साता अगाडि विप्लव कालिकोट पुगेकाले सुचना बाझिएको छ। प्रहरी स्रोत भने कालिकोटपछि उनी भारत गएको दावी गर्छ।
जताततै बिस्फोट गराउने नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' छन् कहाँ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
महिषासुररुपी राँगोलाई शहरमा दौडाउँदै वध : भक्तपुरको एउटा फरक जात्रा खम्ये
दशैंमा सुनसान हुने काठमाडौंमा कसरी थुप्रिए झन्डै आधा करोड मान्छे?
शक्ति साधना : शोकलाई शक्तिमा बदल्दै सीमा र संगीता